I-Starmon Metaverse: Idizayinelwe Kahle, Izithiyo Eziphansi, Uhlu Olubanzi Lwezinketho | Kumele Ukwazi! - I-Metaverse
I-Starmon Metaverse: Idizayinelwe Kahle, Izithiyo Eziphansi, Uhlu Olubanzi Lwezinketho | Kumele Ukwazi!
Njengoba unyaka ka-2021 usondela ekupheleni, imakethe ye-crypto asset izoba phakathi nesikhathi sezinxushunxushu. Izimboni eziningi ziphinde zavutha emakethe yalo nyaka, futhi kubonakala sengathi imidlalo ye-metaverse blockchain izogcina ukuthandwa kwayo ngo-2021 futhi idlule yona njengomholi wemakethe onyakeni omusha.
Ngokusho kokusebenza kwamanje kwemakethe, intshisekelo yabatshalizimali emkhakheni wezokudlala we-blockchain iphinde yavutha, futhi izimpahla ze-crypto zamaphrojekthi wegeyimu ye-blockchain edumile njenge-MANA, i-AXS, ne-SAND zonke zibone ukwanda okukhulu kwenani kuleli sonto, phakathi kwezinye izinto.
Uma uzizwe sengathi ulahlekelwe yizinto eziningi ngo-2021, qiniseka ukuthi awuphuthelwa yi-StarMon, okubikezelwa ukuthi izohola embonini yemidlalo ewuchungechunge ngo-2022. Ngokwezindaba zakamuva ezishicilelwe yi-StarMon, i- Isigaba sokuhlola umdlalo we-StarMon sizofika esiphethweni kuleli sonto, futhi umdlalo ogcwele uzokwethulwa maduze nje ngemva kwalokho.
Njengamanje, i-StarMon inabalandeli abangaphezu kuka-70,000 ku-akhawunti yayo esemthethweni ye-Twitter, futhi imakethe yayo yokuhweba yabalingiswa abangaphakathi kwegeyimu isifinyelele ku-24,000 BNBS (ebiza cishe i-USD 13 million).
Ngaphezu kwe-Southeast Asia, South Asia, South America, nezinye izindawo, ama-Kols kanye nemiphakathi kulezi zifunda iyaqhubeka nokugqugquzela i-StarMon. Njengoba ukwethulwa ngokusemthethweni kwegeyimu kusondela, umphakathi we-StarMon ujabulela kakhulu izinzuzo eziyingqayizivele i-StarMon enazo ngaphezu kwamanye amaphrojekthi afanayo.
Umdlalo Oklanywe Kahle
Ukuba ne-Starmon eqenjini lakho kuyadingeka, futhi i-Starmon ngayinye inokubukeka kwayo okuhlukile, izimfanelo eziyisisekelo, namagugu ekhono, kanye namakhono nobuntu.
Kunamakhono ayisithupha e-Starmon ngayinye, okuhlanganisa ezempilo, isivinini, ukushesha, ukuzivikela, ukuhlasela okukhethekile, nokuqina (Ukuvikela Okukhethekile).
Ukuma kwe-Starmon nakho kuncike emandleni ayo, okunquma ukuthi inamandla ekugadweni noma ekuhlaseleni. Izinto ezengeziwe kanye nezinhlamvu zizophinde zibe nomthelela emandleni e-Starmon.
#InkanyeziMon abaqeqeshi, nike nawubona umsebenzi ongase ube ngcono?
Silandele & RT & Like
Phawula isithombe-skrini sakho #Inkanyezi ukuthuthuka okungaba khona
$10 $SMON kubaqeqeshi abangu-10 abanenhlanhla ngamunye #Imivuzo #I-Airdrop #PlayToEarn pic.twitter.com/9CQhIF19JY
- I-StarMon Metaverse (@StarMonGame) Februwari 10, 2022
Ngaphezu kwalokho, ukusebenza kokulwa kwe-Starmon nakho kuthonywa yinkundla nesimo sezulu, njengeSarmon futhi kuzozuza ezimeni ezifanele.
I-Starmon, njengezilwane emhlabeni wangempela, ingase ikhiqize abantwana ngokuhlanganisa ezimbili zohlobo lwayo. Amathuba okuthola izici ezinjengokubukeka, isimo sengqondo, nekhono kubazali bomuntu maningi kakhulu. Ukuzalanisa izingane ezinkulu kulula ngokombono uma bobabili abazali behlukile.
Funda Futhi: I-Polkacity Metaverse: Okwedlule, Iphrojekthi, Ithimba, Idemo, Imakethe ye-NFT [Ulwazi lwakamuva lwango-2022]
Kodwa-ke, kunethuba elincane lokuthi izingane zizothola ifa lezimfanelo zofuzo lwezinhlanga okungezona ezanoma yimuphi umzali, okungase kumangaze abadlali.
Izithiyo Eziphansi kanye Nohlu Olubanzi Lwezinketho
Akuvamile ukuthi imidlalo ye-blockchain ibe yi-2D noma isekelwe kuwebhu, igxile ku-DeFi esikhundleni sokudlala umdlalo. Ngokungafani ne-Pokemon, i-StarMon iwumdlalo weselula oyi-3D onokudlala okufana nowePokemon.
Izimo zegeyimu ezidlalekayo noma ezihleliwe zifaka ukuzidela kwe-PVE, izinkundla ze-PVP, nokwakhiwa komhlaba e-StarMon okwamanje. Ukuze bawine, abadlali kufanele balwe nenhlangano ebizwa ngokuthi iPredator futhi baqoqe uhla lwezinto eziwiswe izitha ezibulewe ezingeni elisha.
Uma kuba nzima kakhulu ukuwina, futhi lapho umklomelo wakho uzoba nenala, kulapho ukhuphuka khona izinga oya kulo ngemodi yohambo lwe-PVE.
Ku-PVP, ababambiqhaza baya-toe-to-uzwane. Abaqhudelana nabo abafisa ukwenyukela ezinhlwini kumele baqhubeke bethuthukisa amakhono abo e-Starmon futhi bathuthukise amasu asebenza ngempumelelo afanayo nawokusebenza. Imiqhudelwano ye-PVP Ladder yabaqeqeshi abakhethekile izophinde yethulwe ngabakwa-StarMon.
Ukuze kube nokuchuma kwesikhathi eside kwemvelo nokuzinza, imodeli ye-deflationary iyadingeka.
Njengomphumela wokwethulwa kwe-StarMon, i-Play to Earn initiative, lapho bonke abadlali be-blockchain bezogxila kukho, isiqalile ngokusemthethweni.
Ukuze uqalise nge-StarMon, udinga ukuba ngumnikazi wama-Starmons amathathu, abiza ngaphansi kuka-1,000 USDT. Omunye umdlalo we-blockchain othuthukiswe yi-YooShi, i-DNAxCAT, ukhululiwe futhi izinzuzo zawo ze-Play to Earn zizinzile phakathi nezinsuku zokuqala ezingu-30 zokusebenza.
Nge-DNAxCAT njengomhlahlandlela, kuphephile ukuthatha umjikelezo wokubuya we-StarMon okungenani izinsuku ezingama-60. Ngaphezu kwalokho, ukusebenza kwe-StarMon kungase kuthuthuke esikhathini esizayo njengephrojekthi yegeyimu ye-blockchain yekhwalithi ephezulu.
Funda Futhi: I-Decentraland Metaverse: Umkhosi, umhlaba, Intengo yomhlaba, Isonto Lemfashini | Ulwazi Oluphelele!
Isifaniso singadwetshwa phakathi kwe-StarMon kanye ne-Axie Infinity's ecosystem, kokubili okuhlanganisa ukubusa kanye nethokheni ehlobene negeyimu. I-StarMon iphinde yasebenzisa imodeli yokwehlisa amandla entengo yezimo ze-SMON ne-GST ukuze kugcinwe i-Play ukuze Uzuze imali kanye nomnotho onempilo wemvelo.
Ukusetshenziswa kwe-SMON ne-GST kufaka phakathi ukuzalanisa/ukufukamela, ukuziphendukela kwemvelo/amakhono/thalente/ukuthuthukiswa okungenzeka, njll. Nokho, ukuze kugcinwe ukusekelwa kwevelu okuqhubekayo kwe-Starmon ngokwayo, ezimweni ezifana nokuvela kwe-Starmon amanye ama-Starmons azodliwa njengento esetshenziswayo.
Kubadlali bamageyimu, i-StarMon ihlinzeka ngomuzwa ofanele wokudlala ngenxa yezithombe zayo ze-3D, indlela yokudlala ebushelelezi, nobuhle obuhehayo. Ngaphezu kwalokho, ijika lokufunda le-StarMon aliwumqansa kakhulu.
Kodwa-ke, ukuze ube ngumqeqeshi omkhulu we-Starmon ezwekazini lase-Andres, abadlali kufanele bafunde ngezilungiselelo ezihlukile zomdlalo. Ukudlala kwe-StarMon kuthuthukiswa kakhulu ukuxhumana phakathi kwezilungiselelo eziyinkimbinkimbi nomthelela wempi.
Funda Futhi: I-Revomon Metaverse: Izici, Thola Imali, Iqiniso Elingokoqobo, Ozakwethu| Ulwazi Oluphelele!
Izintshumayelo, izinsiza, ama-prop, njll. emdlalweni konke kuphethwe abadlali, ngenxa yobuchwepheshe begeyimu ye-blockchain. I-StarMon, iphrojekthi yegeyimu ye-blockchain ethembisa kakhulu kumetaverse ekhulayo, izoqhubeka nokudonsa ukunaka eminyakeni ezayo.
Kusuka Ku-Cold Season 2: Usuku Lokukhishwa: Sakaza, Isakhiwo, Konke Odinga Ukukwazi!
Ingabe Uyilangazelela I-Beetlejuice 2?
Idokhumentari Yomcimbi Wakamuva Kurekhodi
I-Saints Row: Konke odinga ukukwazi mayelana nokuqalisa kabusha!
I-Deathground - Umdlalo Othusayo Wokusinda Kwe-Co-op!
Isizini Yekhaya Elimnandi 2: Konke Odinga Ukukwazi!
I-Bleach Isizini 17 Usuku Lokukhishwa: Konke Odinga Ukukwazi Ngayo!
Ungasisebenzisa Kanjani Isilingo Samahhala seDisney Plus?
Baldur's Gate 3(ukukhululwa okuphelele) - Konke Esikwaziyo Kuze kube manje
Ama-Eidolons Alahlekile: Konke Esikwaziyo Kuze kube manje
Isizini yesi-5 ye-Ladybug eyisimangaliso: Ingabe lolu chungechunge luvuselelwe noma lukhanseliwe?
Sazi Konke Ngokufutheka Kwenkunzi
© 2022 | Wonke Amalungelo Agodliwe